‘Ayidayisi’ imisebenzi kaMasipala – LIVE Express
UMasipala weTheku usukhiphe isexwayiso ngamaqola adayisa ngemisebenzi kaMasipala.
Lokhu lulandela izinsolo ezehlukene nezikhalo ezisuke zivela kumalunga omphakathi asuke ebanjiswe isisila sehobhe kuthiwa awakhiphe izizumbulu zemali ukuze babe ngabasebenzi bakaMasipala. Kuthiwa kunezikhangiso esezisabalele zemisebenzi kaMasipala weTheku kodwa ezingombombayi.
Lo Masipala usuxwayise umphakathi ukuthi uqaphele izikhangiso zemisebenzi kaMasipala ezingamampunge wathi wona awusoze wafuna imali kubantu abasuke befuna imisebenzi.
OyiSekela Menenja emnyangweni wakwa – Human Resources, uDumisile Nene, uthi uMasipala ulandela imigudu yokuqasha enobulungiswa futhi ecacile.
“Imigomo yethu yokuqasha incike ekuthuthukiseni izinhlanga ezahlukene futhi ayicwasi ngokwebala, nangokobulili”, kuchaza uNene.
Uqhube wathi umphakathi akufanele uze uzixake ngalezi zikhangiso ezingamanga nalapho abantu begcina sebeyalelwa ukuba bakhokhele abathize imali.
NgokwaMasipala weTheku imisebenzi kaMasipala ikhangiswa kwi-Website kaMasipala kusetshenziswa uhlelo lokufaka izicelo zemisebenzi kwi-internet ku-www.durban.gov.za.
Ngale kwalokho iphinde ikhangiswe kwiphephandaba likaMasipala eliphuma njalo emva kwamasonto amabili, i-Metro Ezasegagasini. Eminye ikhishwa ebhukwini likaMasipala kanjalo nakwamanye amaphephandaba.
Image: Msizi Zondi, LIVE Express
BUKA: Bekushaywa ‘amavosho’ kumenyezelwa ukuketulwa kukaMugabe
Kulindeleke izithunywa ezingu-20 000 koweNgculazi